ငါးမိနစ်စာ စားမြုပ်ပြန်ခြင်း - MYATMINGALAR
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ထဲမှာ လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာ ဒီနှစ်ခုကို ခွဲဲခြားရတာ ခက်တယ်…. သူများအတွက် ခွဲခြားပေးရတာ နည်းနညး်လွယ်သေးတယ်… အဲ ကိုယ့်အတွက်ဆိုရင်တော့ …… တဏှာ က ကပ်နေပြီလေ …………
တစ်ချို့တွေကျတော့လဲ မိဘတွေရဲ့လိုအင် ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ……တစ်ချို့ကျတော့ သားသမီးတွေရဲ့ လိုအင် အတွက်…..
အခုခတ်ကြီးက လည်း နောက်ဆုံးရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ် ဆိုတဲ့ဟာတွေ ကြောင့် ရပ်ရွာ ထဲမှာ ကြားနေရတာ ဟိုဟာလေးက မိုက်တယ် လိုချင်လိုက်တာ…….ဒီဟာလေးက အသစ်လေး လန်းတယ် လိုချင်လိုက်တာနဲ့ …
လိုချင်တယ်….. ဆိုတဲ့ ဒီစိတ်လေး ကြောင့်
• အာဒံနဲ့ ဧဝ ကတော့ လိုချင်စိတ်ပြင်းပြလာတော့ ဘယ်သူ့စကား ဘယ်သူ့တားမြစ်ချက်မှ နားထဲ မဝင်တော့ဘူး……နောက်ဆက်တွဲပြသနာဆို တာ အဝေးကြီးပဲ…..
• တစ်ချို့တွေက ဘယ်လိုတွေများဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြတယ်မသိဘူး စကားပုံထဲမှာတောင့် သူ့မယားလိုချင် သူ့လင်လှံနဲ့ထိုးလို့ကြားဖူးတာပဲ…. ဒါလဲမဆန်းပါဘူး ဒါ၀ိဒ် မင်းကြီးလဲ ဘာထူးလဲ…..
• တစ်ချို့များကျတော့လဲ နောက်ဆုံးပေါ် model ဆိုင်ကယ်အသစ်လေးစီးချင်လို့တဲ့ တန်ဖိုးကြီး အပျိုစင်ဘဝလေးနဲ့ လဲပစ်လိုက်တယ်။ ကဲ ဘာပြောချင်သေးလဲ …….
• တစ်ချို့ကျတော့လဲ လူလူ ချင်းရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ကုန်ကူးလိုက်ကျနဲ့…..
• တစ်ချို့ကြတော့ ဘယ်သူသေသေ ငတေမါရင်ပြီးရော မူးယစ်ဆေးပဲ ရောင်းဝယ်ကူးသန်းရ ….
ဒီလုပ်ရပ်တွေက ဒီဘက်ခေတ် လူငယ်တွေရဲ့ ခံယူချက်မှာ အမှား လို့မခံယူ ကျတော့လောက်အောင် အရိုးစွဲနေပြီဆိုတော့ ဒို့တွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်က ဘယ်တုန်းကတည်းက စ ပျက်ဆီးနေခဲ့တာလဲ…….
ဒီအကြောင်းလေး ထိုင်စဥ်းစားရင်းနဲ့ ဖုန်တက်နေတဲ့ ကျမ်းစာအုပ်ကို ရုတ်တရက်လှန်ဖတ်လိုက်တော့ တွေလိုက်ရတဲ့ ကျမ်းချက်လေးက ……….
THE LORD IS MY SHEPEHERD I SHALL NOT WANT
Posted in: ရသစာစုTagged : ဗိုလ်ကြက်